पत्नीको जन्मोत्सव मनाउन पूर्वराजा धुलाबारीमा – Janasamsad
पत्नीको जन्मोत्सव मनाउन पूर्वराजा धुलाबारीमा
बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ १११८१५
मेचीनगर । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार धुलाबारी आएर बसेका छन् । पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको ७१ औँ जन्मोत्सव मनाउन उनीहरु मेचीनगरको फाइभ स्टार होटल मेची क्राउन आएका हुन् ।
दमकबाट निजी गाडी चढेर आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित पूर्व रानी कोमल, बुहारी हिमानी तथा नातिनीहरु पूणर्िका र कीर्तिका शाहसँगै छन् । पूर्वरानीको जन्मोत्सव मनाउन सपरिवार आए पनि पूर्व युवराज पारस शाह भने सहभागी छैनन् ।
दमकबाट सुटुक्क आएका राजपरिवार यहाँ तीन दिनसम्म बस्ने होटल स्रोतले जनाएको छ । यहाँ उनीहरु तीन/चार दिन बस्ने गरी आएको बताइएको छ ।
पूर्व रानीको जन्मोत्सव भव्यरुपमा मनाउन होटल मेची क्राउनमा कोठा बुक गरिएको छ । उनीहरु होटलको बेग्लै संरचना (कटेज) मा बसेका छन् । होटल परिसर भित्र बनेको एउटा घर जस्तो कटेजमा बसिरहेको स्रोतको भनाई छ । उक्त कटेजलाई ‘भिल्ला’ भनिन्छ ।
व्यक्तिगत पारिवारिक जमघटको रुपमा उत्सवलाई लिइएको पनि जनाइएको छ । ‘पूर्व रानीको जन्मोत्सव परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर राजपरिवार होटल मेची क्राउन आएर बस्नु भएको हो ।’ पूर्व राजाको सपरिवारको सुरक्षामा होटल परिसरमा निजी सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । पूर्व रानीको जन्मोत्सव कसरी मनाइँदैछ भन्ने विषय बाहिर आएको छैन ।
यसअघि पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पत्नी कोमलसहित अंग्रेजी पात्रोको नयाँ वर्ष जनवरी फस्टको साँझ पनि मेचीनगर-८, धुलावारीस्थित मेची क्राउनमा आएर बसेका थिए । त्यसबेला पूर्वराजा शाह नाच्दै रमाउँदै गरेको भेटिएका थिए । त्यहाँ उनले ‘शायद तिम्रो बाटोमा’ बोलको मधुर गीतमा नाचेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
गत पुस १२ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौँबाट झापा आएका हुन् । उनी हरेक वर्ष जाडो छल्न झापाको दमकस्थित हिमालय चिया बगानभित्र रहेको मिनी दरवारमा आउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनी झापामा रहँदा विगतमा जस्तो राजनीतिक भेटघाटमा छैनन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिक बनेका उनी महत्वपूणर् अवसरहरुमा राजनीतिक अभिलाषासहितको अभिव्यक्ति दिन्छन् । तर, प्रतिनिधिसभा भंग भएयता उनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
पूर्व रानीको जन्मोत्सव मनाउन समिति
पूर्वरानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको ७१ औँ जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाउनका लागि शुभजन्मोत्सव समिति गठन भएको छ । वरिष्ठ समाजसेवी नारायणदेवी प्रधानकोे अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा ३५ सय सदस्यहरू रहेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार जन्मोत्सव आयोजक समितिका सह-अध्यक्षमा राजी राणा, गीता क्षेत्री राणा, इन्दिरा मल्ल, किशोरी महतो, डा. मञ्जुरत्न शाक्य, ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी थापा, इन्द्रबहादुर ठकुरीलगायत छन् भने महासचिवमा राधेश्याम थापा छन् ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा जगदिश खड्का, रामकृष्ण पन्त, प्राडा उषा ठाकुर, प्रकाश चित्रकार, टेकनारायण राजबंशी, ऋषिबाबु परियार, जमुना शेरचन, राजाराम श्रेष्ठ, सयेन्द्र वान्तवा, परशुराम तामाङ, लीलादेवी श्रेष्ठ, सीता लुईंटेल, दामोदरलाल श्रेष्ठ, प्रदीप विक्रम राणा, प्राडा सुष्मा आचार्य, कान्छा गुरु, केशरी पाण्डे, विष्णु भट्टराई, अनिल बस्नेत, रामु राई, सुभद्रा विश्वकर्मा छन् ।
यस्तै अन्य सदस्यहरुमा मीरा राणा, इन्द्रबहादुर शाक्य, घनेन्द्रबहादुर बस्नेत, प्राडा अवधेशकुमार ठाकुर, टंकबहादुर श्रेष्ठ, मणिराज तामाङ, डा. पद्म तुलाचन, केशव भण्डारी, सुमित्रा अधिकारी, विक्रमबहादुर बम, शंकर पौडेल, इन्द्रकुमार चाम्लिङलगायत छन् । सह-महासचिवमा केशरी श्रेष्ठ, अशोकमान बैद्य, पद्म ताम्राकार, सुदर्शन भट्टराई, विशान्तर शाक्य, मीरा रञ्जित र प्रकाश महर्जन छन् ।
शुभजन्मोत्सव समितिका महासचिव राधेश्याम थापाका अनुसार फागुनको ६, ७ र ८ गरी तीन दिनसम्म पूर्व रानीको जन्मोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाइनेछ । विभिन्न मन्दिरमा पूजापाठ, भजन कीर्तनलगायतका कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । पूजा अर्चनापछि समितिका सदस्य तथा सर्वसाधारणले टीका, प्रसाद पूर्व रानीसमक्ष चढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासचिव राधेश्याम थापाले प्रत्येक वर्ष राजपरिवारका सदस्यहरूको जन्मोत्सवका लागि विशेष व्यक्तित्वहरुलाई सहभागी गराई शुभजन्मोत्सव समारोह समिति गठन गरी भव्यरुपमा मनाउँदै आएको बताए ।